Mareykanka oo laga xusayo weeraradii September 11
Wednesday September 11, 2019 - 19:23:10 in News by Super Admin
Dadka Mareykanka ayaa maanta xusaya sanad-guuradii 18-aad ee weerarkii argagixiso ee September 11 2001, kaasi oo ku dhowaad 3,000 oo qof ku dilay New York, Virginia iyo Pennsylvania.
Madaxweyne Trump ayaa maalinkan ku xusaya daqiiqad aamusnaan ah oo uu ku qaban doono Aqalka Cad, ka hor inta uusan xaflad ka dhaceysa Pentagon-ka kala qeyb gelin qoysaska dadkii lagu dilay weerarkaasi oo ay fulisay kooxda Al-Qacida.
Magaalada New York, boqolaal ka mid ah kuwii weerarka ka bad-baaday iyo xubnaha qoysaska kuwii ku dhintay ayaa isugu soo ururi doono Ground Zero oo ah goobtii laga burburiyey daarihii mataanaha ahaa ee xaruntii ganacsiga adduunka, markii lagu dhuftay laba diyaarad oo lasoo afduubtay.
Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa lagu wadaa inuu ka qeyb-galo munaasabad ka dhaceysa Shanksville, Pennsylvania, oo ku dhow halkii ay ku dhacday diyaaradda United Airlines Flight 93 kadib markii rakaabka ay kala wareegeen kooxdii soo afduubatay.
19 nin oo xiriir la leh kooxda Al-Qacida ayaa fuliyey afduubka afarta diyaarad ee lagu fuliyey weerarka.